Al-Shabaab oo la wareegay deegaan Dhuusamareeb iyo Guriceel u dhaxeeya | Xaysimo
Home War Al-Shabaab oo la wareegay deegaan Dhuusamareeb iyo Guriceel u dhaxeeya
Maleeshiyada Ururka Al-Shabaab ayaa saqdii dhexe ee caawa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Ceeldheere, oo ku yaala inta u dhaxeysa Dhuusamareeb iyo Guriceel. Haddii si kale loo dhigana waxay Ceeldheere 30km u jirtaa Magaalada Dhuusamareeb.
Wararka ayaa sheegaya in mintidiinta Al-Shabaab ay iska caabin kala kulmeen ciidamo boolis ah oo deegaankaasi ka hawlgala, inkastoo markii dambe ay u suurtagashay inay la wareegaan gacan ku haynta deegaankaasi.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in uu jiro khasaaro ka dhashay weerarkaasi, oo dhimasho iyo dhaawacba leh.
14-kii bishii November ayay ahayd markii maleeshiyada Al-Shabaab ay bilaa dagaal kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Ceeldheere, inkastoo saacado ka dib ay dib uga baxeen.
Dadka fallanqeeya arrimaha ammaanka waxay ku sheegayan in Ahlu Sunna ay fahamsaneyd xeeladda dagaalka ee Al-Shabaab, inkastoo dadkii qaarkii ay qabaan in dagaalkeedu uu caqiiddo ku dhisnaa.